udkt mkhize usamile kweyokuvalwa kogwayi - Ilanga News
Home Izindaba udkt mkhize usamile kweyokuvalwa kogwayi
udkt mkhize usamile kweyokuvalwa kogwayi
UZWAKALISE ukuthi ukweseka kakhulu ukungadayiswa kukagwayi notshwala uNgqongqoshe wezeMpilo, uDkt Zweli Mkhize (osesithombeni), njengoba izwe ligonqile.
Uthi ukudayiswa kogwayi notshwala ngeke kube nomthelela omuhle empilweni yabantu abaningi, ikakhulukazi kulabo abatholakala ukuthi sebeneCovid-19.
Kuzokhumbuleka ukuthi ukudayiswa kukagwayi notshwala kwamiswa ngemuva kwesimemezelo sikaMengameli Cyril Ramaphosa ngenyanga edlule sokuvalwa kwezwe okwesikhashana ukunqanda ukubhebhetheka kwalesi sifo.
Kuze kube yimanje bangaphezulu kuka-3 000 abantu asebetholakele ukuthi banaleli gciwane kuleli emuva kokuhlolwa kwabawu-108 021 kanti asebedlulile emhlabeni bawu-52.
Ekhuluma nabezindaba ngo-Mgqibelo uDkt Mkhize, uthe ugwayi ungadala izinkinga kakhulu kulabo asebethelelekile.
“Uma unalesi sifo ukubhema kuzophazamisa amaphaphu ekubeni naso (lesi sifo) sihlasela kakhulu amaphaphu njengoba kuphazamiseka ukuphefumula kulowo onaso. Siyacela ukuba abantu bazame ukuqhelelana nogwayi, ikakhulukazi kulabo abatholakala benalesi sifo,” esho.
Uthe inkinga enkulu ngokubhema wukuthi kukhona izingqinamba okuzidalayo esifubeni salowo obhemayo, kanti basabela ukuthi lokhu kungenza nalabo ababhemayo batheleleke kalula uma beqhubeka nokubhema.
Uthe sebakuqaphela ukuthi labo ababhemayo kulula ukuthola izifo ezinjenge-bronchitis noma isifo sofuba.
“Ngaphandle kwalokho, ugwayi uphinde uphazamise ukuhamba kahle komoya ngaphakathi emzimbeni,” kuqhuba yena.
Uthi notshwala ngokunjalo bunemithelela engemihle, ikakhulukazi ekusebenzeni komqondo.
“Ngaphansi kwezimo ezibucayi esisebenza ngaphansi kwazo, sinxusa wonke umuntu ukuba kube neqhaza alibambayo ukuze sikwazi ukwehlisa ingcindezi ezibhedlela ngokuqinisekisa ukuthi kasikhuli isibalo sabantu abathelelekile,” kusho uDkt Mkhize.
Uthi okudale ukuba uhulumeni uvale ukuthengiswa kotshwala wukuthi lesi sikhathi sidinga abantu abasemiqondweni yabo ephelele ukuze bakwazi ukuziphatha, wukuthatha izinqumo ezingababeki engcupheni yokutheleleka, wukuzivikela noma bekhwehlela nokunye okuningi.
Uthi ukungabi bikho kotshwala kwenza singabi sikhulu isibalo sabantu abatholakala ezibhedlela belimele, begwaziwe noma bedutshuliwe.
Previous articleeyezokudla yesabisa ngokubopha ungqongqoshe
Next articleUdlelwe imoto umdlali welePSL